MUUQAAL: Madaxwayne Qoorqoor oo ku Dhowaaqay dagaal ka dhan ah Alshabaab (Daawo) | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
MUUQAAL: Madaxwayne Qoorqoor oo ku Dhowaaqay dagaal ka dhan ah Alshabaab (Daawo)
Guriceel ( Kalshaale ) Madaxwaynaha Maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) ayaa ku dhowaaqay in Deegaanada Galmudug ay ka sifan doonaan Maleeshiyaadka Alshabaab.
Qoorqoor Wuxuu Booqday Ciidamada Xooga dalka Qaybta 21aad, Wuxuu xusay inay deegaaanada Galmudug ee ku sugan yihiin laga saari doono, Waxaana xusid mudan in mudooyinkii ugu dambeeyay ay Galmudug Xooga saartay Dhismaha iyo Midaynta Ciidamada, Iyadoona tababar loosoo xidhay Cutubyo kala duwan.
Madaxwayne Axmed Cabdi kaariye Qoorqoor Wuxuu uga mahad celiyey Ciidamada sida ay Naftooda ugu horaynaan dalkooda.
“Waxaan rabnaa inaan duurka ugu galno, iyo Meel walba oo ay galaan, Waxay hada ku socdaan waa Dhuumaalaysi, Waxaanu ugu geli doonaa goobkasta oo ay joogaan, waan garab taaganahay ciidamada, waana la socon doonaa”.
“Ciidanka sharafta leh in badan ayaan u mahad celinayaa, waxaa la galay wakhti ka duwan midkii hore”. Ayuu yidhi Madaxwaynaha Galmudug.
Madaxweynaha Galnus Qoorqoor ma tegi doonaa oo ka surin Calanka Galmudug Xaradheere, Ceeldheer, Ceelbuur, Mareeg iyo 50 tuulo hoos taga..
I wish him good lucky haduu daanyeerta gabdhaha 13 jir saqiirka ah garcinaya rag dhulka ka xoreeya samaysto, Somalidana ha taageeraan.
Qoorqoor rag iska dhig oo qabso dhulkaaga.
Beshaan Saleebaan, Gardarro kuma aqaan, waxayna ka mid tahay beelaha aan dhaqankooda jeclahay (kuma jiro sheegatada Sida Cadaado ah), INTA shaqsi oon ka bartay ILAA Dhallinyaradi, waa dhimanyahay MID aan barashadiisa ka shallaayo, MARKA LOP Saaxiibow waxaan rajayna INAANAN Qoor Qoor ku Hungoobin (sirmin). WBT
Salaan sharaf ka dib, wadadii hore ee Galmudug marka tabar isku arkaan Galkacyo weerari jireen oo dagaal cidna ku rayn geli jireen ileen Cumar Maxamud gurigaagii ka carar rag yaqaan maahee…!
Qoorqoor ha garto dhulka gobolkaaga xoreyso.. guul u rajayn haddii taas garto.👍
LOP Saaxiib, jooji brobagaanka iyo Annaga fiican, Ummad indha baqaaqa ayyaan hanuuninaynaaye. WBT
LOP Saaxiib, waagii AY Kacaanka iyo Saleebaan colloobeen, Cumar M/muud wuxuu ka mid ahaa Beelaha ay Saleebaanka isugu dhawyihiin, BALSE Waayihii dambe waxaan arkay, Qolyo aan xiriirkaa wanaagsan, AAMBA tixgelinayn oo ay Qabyaaladdi ka TAN badisay.
≈©≈Saaxiibow, waxaa kale oon xusuustaa AUNTE Sargaal la dhihijiray, BLACK oo Saleebaan ahaa oo ku dhaawacmay dagaal dhex maray iyyaga iyo Mreexaan OO intuu Mrexaanki qaaday oo dhowr Bilood Daaweynay Markuu Raystana Beeshiisi u soo celiyay. ≈©≈LOP, saaxiibow goormay dadnimadaasi ka suushay Somali?. WBT
Salaan sharaf ka dib, wadadii hore ee Galmudug marka tabar isku arkaan Galkacyo weerari jireen oo dagaal cidna ku rayn geli jireen ileen Cumar Maxamud gurigaagii ka carar rag yeelaya maahee…!😁